ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): တိုက်ပွဲခေါ်သံ
Posted by LIN LET KYAL SIN at 11:38 PM
အထင် အရှား.. ပြည်သူမေတ္တာ ခံယူ ကြပါစေသော်..
This is an essential post for everyone. Unity is very important to finish up our unfinished responsibilities. Thanks for this post my sis.
Yes! We're strongly united for our aim to Democratic Free Burma.
ပီနန်ဆရာတော်ကို အမြန်ဆုံးပင့်ပါ။ သာ့သနာ့ ဥသျှောင်အဖွဲ့ကို ဒီအကြောင်းပြောပြပေးပါ။ ဆွေးနွေးပါ။ စင်ကာပူကမျိုးချစ်မြန်မာတွေ စက်တင်ဘာအရေးအခင်းနဲ့ ကျန်တဲ့ ၈၈ လိုအထိမ်းအမှတ်အရေးအခင်းလိုဟာမျိုးတွေတွဲလုပ်နိုင်
အောင် ဆရာတော်ကြီး ဦးပညာဝံသတို့ကို မေးမြန်းလျှောက်ထားကြပါ။ ကိုယ်ဖြစ်စေချင်တာကို ပြောပြကြပါ။
ညီတယ်ဟေ့ ညီတယ်ဟေ့ ညီတယ်ဟေ့
သင်ပေးလိုက်ပါ ကြံဖွံ့တွေကို ... ဒီကောင်တွေက ကွန်ပြူတာကို သူ့ပထွေး တွေ သင်တန်းပေးမှ မြင်ဖူးတဲ့ကောင်တွေ. ဒီကောင်တွေလောက်တော့ ဘားမား ဘလော့ကာတွေကပျင်းတယ်ဗျာ
ပြင်ဆင်ဖို့ လိုအပ်ချက်တွေ ဖော်ပြပေးတာ သိပ်ကောင်းတယ်။
ညီမလေးပြောတားတဲ့ အချက်တွေဟာ ထောင့်စေ့ သလို blogger တိုင်းသတိပြုသင့်တဲ့ အချက်တွေပါ။ ဒီpost လေးကို လိုအပ်တဲ့ အချိန်မှာ တင်နိုင်လိုက်တာ အရမ်းအကျိုး ရှိသွားပါတယ်။
Ha Ha Ha Ha... USDA sucks. There is nothing to learn to blog.
ခု မှ ပို့ စ် အဟောင်းတွေကို ပြန် ဖတ် မိတယ်….
Shameless groups ထဲ က ပို့ စ် အားလုံး ကို ပါ…
ကိုယ်နဲ့ အမြင်မတူတာနဲ့ ဘဲ အမျိုးယုတ်တွေ တဲ့ လား…
မိ စ္ဆာ ဒိဋ္ဌိ တွေ တဲ့ လား……မျိုးမစစ်တွေ တဲ့ လား….
ကျွန်တော် နအဖ ဘက် က မဟုတ်သလို…ဒီမိုသမား လဲ မဟုတ် ဘူး…
ဂျူးဂျူး ရေ…ညီ မ က အရေးအသားလဲကောင်းတယ်….ဗဟုသုတလဲပြည့်ဝပါတယ်….
ဒါပေမယ့် …ကျွန်တော့် အမြင်ပြောတာနော်…နိုင်ငံရေးအသိအမြင် ပိုပြီးပြည့်ဝအောင် ကြိုးစားဖို့လိုသေးတယ်….
ကျွန်တော့်ကို ဆဲ ရင် လဲ ကျွန်တော်ခံ မယ်….. ကျွန်တော် comment ကို မ တင်ချင် လဲ ညီမ သဘောပဲ….
အမြင် မတူတာကို စာရေးတတ်တိုင်း အမှန်တရား ဆို ပြီး တဖက်သတ်ချည်း ရေးပြနေလို့မရသေးဘူး….
စာ ရေး ကောင်း တဲ့ …အတွေးအခေါ်ကောင်းတဲ့ ….
ဂျူးဂျူး တစ်ယောက် နိုင်ငံရေးနဲ့ မသက်ဆိုင်သော စာများများ ရေးနိုင်ပါစေလို့ ………..
ပို့ စ် အားလုံးကို အမှတ်တရ သိမ်းထားပါတယ်……